Ziziphi iindlela eziqhelekileyo kwiNzululwazi
Igama elithi hterogeneous is adjective elithetha ukuba lenziwe ngamalungu athile okanye ahlukeneyo.
Kwi-chemistry, igama lisetyenziswe rhoqo kumxube we-heterogeneous . Lo ngumnye onobunjwa obufanayo. Umxube wentlabathi kunye namanzi unobumba. Ikhonkrithi iyindima. Ngokwahlukileyo, umxube ohambelana nomzimba unomxholo ofanayo. Umzekelo umxube weshukela ococekileyo emanzini.
Ingaba umxube uphezulu okanye ulungelelanise kakhulu kuxhomekeke kwisilinganisi okanye ubungakanani besampula. Umzekelo, ukuba ukhangele kwikhonkco zesanti, kunokubonakala ngathi uye kwasasaza iindidi (ngokufanayo). Ukuba ubujonge isanti phantsi kwe-microscope, unokufumana izixhobo ezingabonakaliyo zezinto ezihlukeneyo (i-heterogeneous).
Kwizinto zokwenzululwazi, iimifanekiso zingabandakanya ngokupheleleyo isinyithi, isalathisi, okanye i-alloy, kodwa zibonisa izigaba ezihambelanayo okanye i-crystal structure. Ngokomzekelo, isiqwenga sesinyithi , ngelixa senziwe ngokufanayo, sinokuba nemimandla ye-martensite kunye nezinye ze-ferrite. Isampuli yelungu le-phosphorus linokuquka i-phosphorus emhlophe nebomvu.
Ngomxholo obanzi, nayiphi na iqela lezinto ezidibeneyo lingachazwa njengento echanekileyo. Iqela labantu lingaba li-heterogene ngokumalunga nobudala, ubunzima, ubude, njl.
Funda indlela i-Virus Replication ivela ngayo
Ukuguqula iGallons kwiLitha
Yayinjani iMongolica yasePax?
Ngaba amaKatolika angayixhasa umtshato wesini?
Amagama aqhelekileyo adidekile: I-Pail kunye nePale